Tag: nkiri | Martech Zone
Nụrị m nke ọma… azụmahịa niile bụ mpaghara. Anaghị m arụ ụka na azụmahịa gị nwere ike ịdọta azụmahịa mba na mba. Naanị m na-arụ ụka n'eziokwu na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anwa izere ịbụ ndị a kpọrọ dị ka mpaghara - ọ bụ ezie na ọ nwere ike inyere ha aka. Anyị na-akwado ndị ahịa anyị niile ịkwalite ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ ha. Ma ọ bụ site na ngwa eserese siri ike dị ka anyị wuru maka Nnụnnụ Nnụnnụ Na-akparaghị ókè, ma ọ bụ na-agba ndị ahịa ume
Ọ bụrụ n'ịme nyocha ụfọdụ nke saịtị ndị dị mkpa na-akpọsa arụmụka ikike nke Twitter, ị ga-ahụ iyi m emere n'ọtụtụ okwu. Ọ na - ebugharị m mkpụrụ osisi na onye ọ bụla na - ekwu okwu banyere ya - na onye ọbụla gara wee wuo Twitority na Twithority Aha ka mma gaara abụ Tweets Search na Nọmba Na-agbadata site na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ. Amaara m, nke ahụ bụ aha ogologo ogologo, mana nke a bụ kpọmkwem ihe ọ bụ. Ọ bụghị
N'ọnwa gara aga, edere m ihe kpatara ụlọ ọrụ ihe nkiri ji akụ afọ n'ala. Ikekwe m gaara ede ihe kpatara na ọ na-ada 'anyị'. O doro anya na nke a bụ ihe ga-eme na ntinye ahụ. N’abalị taa, mụ na ụmụaka gara hụrụ Pirates ndị Karịbian, Igbe Onye Nwụrụ Anwụ. Ha gaara akpọ ya, Ndị Pirates nke Caribbean, Ka anyị mee ka mmiri ara ehi dị ka ọtụtụ ihe nkiri si na nke a ka anyị nwere ike. Mmetụta dị na fim ahụ bụ ihe ịtụnanya na